.js ​နဲ့ eot ​ကို ​ဘယ်​နေ​ရာ​မှာ ​စိတ်​ချ​လက်​ချ ​တင်​လို့​ရ​နိုင်​လဲ ~ ညီနေမင်း ( နည်းပညာ )
.js ​နဲ့ eot ​ကို ​ဘယ်​နေ​ရာ​မှာ ​စိတ်​ချ​လက်​ချ ​တင်​လို့​ရ​နိုင်​လဲ
​ဒီ​နေ့​ည ​ဖြစ်​ပျက်​လိုက်​တာ​က​တော့ ​ကိုယ့်​ကို​ကိုယ် ​ရီ​လဲ​ရီ​ချင်​တယ် . ​အ​ပြစ်​လဲ​တင်​မိ​တယ် . ​ဟို​တစ်​နေ့​က ​ညီ​ငယ် ​တစ်​ယောက် ​လာ​ပြော​တာ​ကို ​အ​မှု​မဲ့​အ​မှတ်​မဲ့​ထား​လိုက်​မိ​တယ် . ​အစ်​ကို​တဲ့ ​အစ်​ကို့​ဆိုက်​ကို ​ကျွန်​တော် ​ဝင်​ပြီး ​ကြည့်​လိုက်​ရင် kaspersky ​က ​ထ​ထ ​ပြီး ​စစ်​နေ​တယ်​လို့​ပြော​တယ် . ​ကျွန်​တော်​က​လဲ ​ထ​ထ​စစ်​ရ​အောင် kaspersky ​က zip ​ဖိုင်​တို့၊ rar ​ဖိုင်​တို့​အ​ထဲ​မှာ virus ​ရှိ​မ​ရှိ ​အ​တိ​အ​ကျ ​မ​စစ်​နိုင်​ပါ​ဘူး​လို့ . ​စဉ်း​တော့ ​စဉ်း​စား​သား . ​ဘာ့​ကြောင့်​များ​လဲ​ပေါ့ . ​ဒါ​ပေ​မယ့်​စိတ်​ထဲ​က ​အ​မှတ်​တ​မဲ့​ပဲ​နေ​ခဲ့​တာ . ​ပြ​ဿ​နာ​က ​အ​ခု​မှ​စ​တာ ​ကျွန်​တော် http://www.ripway.com ​မှာ ​တင်​ထား​တဲ့ eot ​ဖိုင်​ကို ​သွား​သွား​စစ်​ပြီး . eot ​ဖိုင်​ကို ​သွား​ပြီး ​စစ်​နေ​တာ​ကိုး . ​အဲ့​ဒါ​နဲ့ eot ​အ​သစ်​ပြန်​လုပ် . ​ပြီး​တာ​နဲ့ ​ကို​ဝယ်​ထား​တဲ့ http://www.nyinaymin.net ​မှာ ​သွား​တင် . ​အ​စ​က​တည်း​က ​ကို့ hosting ​မှာ ​တင်​ရင် ​ဘာ​ပြ​ဿ​နာ​မှ ​ဖြစ်​လာ​မှာ​မ​ဟုတ်​ဘူး . ​အ​ခု​တစ်​ခါ​တည်း ​သူ​ငယ်​ချင်း​များ​ကို​လဲ ​လက်​တို့​ချင်​ပါ​တယ် . ​ကျွန်​တော် ​တွေ့​တဲ့ ​ဆိုက်​တော်​တော်​များ​များ​က​တော့​ဖြင့် link ​တွေ ​သေ​ရ​တာ​နဲ့ . ​ဖိုင်​ဖျက်​ရ​တာ​နဲ့ . ​သတ်​မှတ်​တဲ့ bandwith ​ကျော်​ရ​တာ​နဲ့ . ​ရှုပ်​ယှက်​ကို ​ခတ်​နေ​တာ​ပဲ . ​တစ်​ခု​မ​ဟုတ်​တစ်​ခု ​ဖြစ်​နေ​တာ . ​အဲ့​လို​မ​ဖြစ်​ရ​အောင် ​အ​ခု ​အ​ကြံ​ပေး​ချင်​လို့ . ​ကျွန်​တော်​တို့​အ​နေ​နဲ့ http://www.fileden.com, http://www.ripway.com ​တို့​ကို ​အား​မ​ကိုး​ပဲ​နဲ့ ​ကျွန်​တော်​တို့ ​ရှေ့​မှာ​ရှိ​နေ​ပြီး ​ကျော်​ကျော်​ပြီး eot ​တင်​ဖို့​တို့ .js ​ဖိုင်​တွေ ​တင်​ဖို့​တို့​ကို ​အ​ဝေး​ကြီး​မှာ ​လိုက်​စဉ်း​စား​နေ​တယ် . ​မ​လို​ပါ​ဘူး . ​အ​နီး​လေး​မှာ​ကို​ရှိ​ပါ​တယ် . ​သူ​က ​ဖျက်​လဲ​ဖျက်​မှာ​မ​ဟုတ်​သ​လို . ​ကျွန်​တော်​တို့​နဲ့​လဲ ​ရင်း​နှီး​ပြီး​သား . ning ​ဆိုက်​လေ​ဗျာ .
​နောက်​ဆုံး​အ​ဆင့်​ဗျာ ​ကျွန်​တော်​တို့​အ​နေ​နဲ့ ​ခို​ကိုး​ရာ​မဲ့​ပြီး ​ဘယ်​ဆိုက်​တွေ​က​မှ ​လက်​မ​ခံ​တဲ့ .js ​ကို​တောင်​မှ ​စိတ်​ချမ်း​လက်​သာ​နဲ့ ​တင်​နိုင်​ပါ​တယ်​ဗျာ .
​ကဲ ​စိမ်း​ချမ်း​လက်​သာ​နဲ့​သာ ​တင်​ကြ​တော့​ဗျာ . ​အ​ခု​ဆို​ရင် googlepage ​က​လဲ ​လက်​မ​ခံ​တော့​ဘူး​လား​မ​သိ ​ကျွန်​တော်​တော့ ​မ​တင်​ဖူး​သေး​ဘူး googlepage ​မှာ . ​ကဲ​ဗျာ ​ဘယ်​လို​လုပ်​ပြီး Ning ​မှာ ​တင်​ဖို့ ​သ​တိ​ရ​သွား​လဲ​ဆို​ရင် ​ဒီ​နေ့​ည zawgyi.net ​ကို​သွား​ပြီး​တော့ zawgyi-one font ​ကို download ​လုပ်​မ​လို့​သွား​ကြည့်​လိုက်​ပြီး​တော့ ​မ​နှိပ်​ခင် pointer ​နဲ့ ​ထောက်​ထား​ကြည့်​လိုက်​တော့ ​အောက်​မှာ​က ​ပေါ်​နေ​ပြီ ​ဖိုင်​ကို​တင်​ထား​တာ​က ning ​မှာ​တဲ့ ​မ​ယုံ​ရင်​သွား​ထောက်​ကြည့်​လိုက် . ​အဲ့​ဒါ​မှ ​သွား​သ​တိ​ရ​တယ် . eot ​တို့ .js ​လဲ ​လက်​ခံ​လောက်​ပါ​တယ်​လို့ . ​စမ်း​လဲ​စမ်း​ကြည့်​ရော ​အ​ဟုတ်​ပဲ​ဗျာ . js ​ကို​လဲ​လက်​ခံ​ထား​တယ် . ​တစ်​ကယ့်​ကို ​စေ​တ​နာ​ကောင်း​တဲ့ ning ​ဆိုက်​မှာ ​ဒါ​လေး​တွေ ​တင်​လို့​ရ​ပါ​တယ်​ဆို​တာ​ကို ​လက်​တို့​လိုက်​တာ . ​ကဲ ​ဘော်​ဒါ ​ဘော်​ကျွတ်​တို့​လဲ ​စမ်း​ကြည့်​ကြ​ပါ​ဦး . ​နောက်​ဆုံး​တင်​စ​ရာ ning ​ဆိုက်​မ​ရှိ​ရင် ​ကျွန်​တော့် http://www.nyinaymin.ning.com ​မှာ ​လာ​တင် . ​ကျွန်​တော် ​အ​စမ်း​တင်​ပြ​ထား​တာ​ရှိ​တယ် ​ဖိုင်​ကို​သွား​ကြည့်​လို့​ရ​တယ် . http://nyinaymin.ning.com/forum/topics/zawgyi2-1 ​အဲ့​မယ်​သွား​ကြည့် ​ကျွန်​တော်​တင်​ထား​တယ် . .js ​ကို​လက်​ခံ​ပြီ​ဆို​တော့ readmore ​အ​တွက်​လဲ ​စိတ်​ချ​ရ​သွား​ပါ​ပြီ . ​ခ​ဏ​ခ​ဏ ​လင့်​သေ​နေ​တာ​တွေ ​မ​ရှိ​တော့​ပါ​ဘူး .
​ချမ်း​လင်း​နေ November 30, 2009 at 6:57 AM
​အ​ဝေး​ကြီး​တွေ ​လျောက်​တင်​နေ​ရ​တာ ​ညီ​ပြော​မှ ​နီး​နီး​လေး​နဲ့ ​ဝေး​မှန်း​သိ​တော့​တယ်​ဗျာ။
Du Ko September 20, 2011 at 9:00 AM
​ကျွန်​တော် Post ​တွေ​ကို ​ခေါက်​ချင်​လို့ google ​မှာ​ရှာ​ကြည့်​ပြီး ​စမ်း​တယ်...
​အဲ​ဒါ [+/- ] Show More Post ​ဆို​တာ​လည်း​ပေါ်​တယ်
​ဒါ​ပေ​မယ့် ​အဲ​ဒီ [+/-] Show More Post ​ဆို​တာ​ကို ​နှိပ်​လိုက်​ရင် ​ဘာ​မှ ​ကျ​မ​လာ​ဘူး​ခင်​ဗျ
Blogger ​တွေ​ကို​ပိတ်​ထား​တာ ​ဒီ​နောက်​ပိုင်း​မှ ​ပြန်​ဖွင့်​ပေး​လို့ ​စ​သုံး​ဖြစ်​တယ်
naing latt December 27, 2012 at 5:53 PM
nokia c7 ​ကို​မြန်​မာ​ဖောင့်​သုးံ​လို့​ရ​လား ​သုးံ​လို့​ရ​ရင်​ပြော​ပြ​ပေး​ပါ​ဆ​ရာ